Nyochaa Nsonaazụ Nyocha rụpụtara nke ọma na Cross-Tabs na Filters
75% nke ndị nwamba na-enwe mmasị na ha ma nwee mmasị na ngwaahịa m na-esi ísì ụtọ.
M na-eme Social Media Marketing maka Nyocha, Monkey, ya mere abum onye nkwado nke iji nyocha nke intaneti iru ndi ahia gi ka iwere ime mkpebi kachasi nma. Nwere ike nweta nghọta dị ukwuu site na nyocha dị mfe, ọkachasị mgbe ị maara otu ihe ma ọ bụ abụọ gbasara imepụta ma nyochaa ya. O doro anya na ide na ịmepụta ezigbo nyocha bụ akụkụ dị mkpa nke usoro a, mana ọrụ niile nke njedebe ga-adị obere ma ọ bụrụ na ị maghị nyochaa ihe ị rụpụtara.
Na SurveyMonkey, anyị na-enye ọtụtụ ngwaọrụ iji nyere gị aka iberi, dais, ma nwee uche maka ụbọchị gị. Abụọ n'ime ihe ndị kasị baa uru bụ obe-taabụ na nzacha. Aga m enye gị nkọwa dị mkpirikpi ma jiri ikpe maka nke ọ bụla, yabụ ịmara otu esi etinye ha n'ọrụ maka mkpa gị.
Gịnị bụ obe-taabụ?
Cross-tabbing bu ihe ngosiputa nke na enyere gi aka nyocha nke uzo abua ma obu kari ajuju. Mgbe ị na-etinye nzacha obe, ị nwere ike ịhọrọ nzaghachi ịchọrọ nkewa, wee hụ otu akụkụ ndị ahụ si zaa ajụjụ ọ bụla na nyocha gị.
Yabụ ọ bụrụ n ’ị chọrọ ịmata etu ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị siri dị iche iche zaghachiri ajụjụ gị dị iche iche, iji ma atụ, ị ga-agụnye ajụjụ nyocha ịjụ ajụjụ gbasara jenda gị. Mgbe ahụ, ozugbo itinyere obe-taabụ, ị ga-enwe ike ọ dị mfe ịhụ etu ndị nwoke siri meghachi omume, ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwanyị.
Reportedmụ nwanyị kọọrọ ndị nwamba karịa mmasị karịa ụmụ nwoke, yabụ ọ bụrụ na ị na-ere ngwaahịa pusi, ị nwere ike ịchọ ịdọrọ ya ya na ụmụ nwanyị.
Ntuziaka nke taabụ nwere ike ịgwa gị ọtụtụ ihe gbasara ndị nwere ike ịnwe mmasị na echiche gị ma ọ bụ ngwaahịa gị - ọ nwere ike ịkewaa ndị zara nke ọma na atụmatụ gị site na otu afọ, okike, mmasị agba - ụdị ọ bụla ị tinyere dị ka ajụjụ nyocha nwere ike iji mezue nzaghachi gị site na iji taabụ.
Kedu ihe nzacha?
Tinye ihe nzacha na nsonaazụ gị iji hụ akụkụ nke ndị nzaghachi gị wepụrụ na ndị ọzọ. Can nwere ike nyocha site na nzaghachi, site na njirisi omenala, ma ọ bụ site na ihe onwunwe (ụbọchị, mezue vs. emezuru azịza, adreesị ozi-e, aha, adreesị IP na ụkpụrụ omenala) iji belata nsonaazụ gị, yabụ na ị na-ahụ nzaghachi site n'aka ndị mmasị gị.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-ere ngwaahịa maka ndị hụrụ nwamba n'anya, dịka ọmụmaatụ, na otu n'ime ajụjụ nyocha gị jụrụ ma ọ bụrụ na ndị na-aza gị dị ka nwamba, azịza nke ndị zara "mba" ajụjụ a nwere ike ọ gaghị adọrọ mmasị. Tinye nzacha nke na-ahọrọ naanị maka ndị zara “ee,” ma ọ bụ “ikekwe” (ọ bụrụ na nke ahụ bụ nhọrọ), ị ga-enwe ike ịhụ nsonaazụ nke ndị ahịa.
Ozugbo anyị nyochachara ndị nwamba, anyị ga-ahụ na ọtụtụ ndị na-aza ajụjụ enweghị mmasị na senti anyị. Anyị na-atụle itinye ego na ngwaahịa ọhụrụ.
Ikpokọta nzacha na Cross-Tabs maka Ọkacha mma Nyocha
Yabụ, ị nwere ike ịnọ na-eche, ị nwere ike itinye ihe nzacha na obe-taabụ n'otu oge? Azịza ya bụ ee! Ọ bụ usoro bara uru maka igbutu mkpọtụ ma nwee nghọta nke nzaghachi gị.
Buru ụzọ tinye nzacha gị. Ya mere ndi mmadu nwere ike inweta ahia, dabere na ihe omuma ayi. Wee tinye taabụ obe gị iji chọpụta otu ndị otu ahịa nwere ike isi chee ya. Yabụ, ịlaghachi na nwayi anyị hụrụ n'anya n'anya, ị ga-ebu ụzọ tinye nzacha ahụ ka ị na-elele nzaghachi nke ndị nwere ike ịmasị ngwaahịa gị.
Mgbe ahụ tinye obe-taabụ gị ka ị mara afọ (okike, ọkwa ego, na ọnọdụ nwekwara ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ ebe a), na voila. A hapụrụ gị echiche zuru ezu banyere ndị ahịa gị nwere ike imebi site na afọ, okike, ma ọ bụ ihe ọ bụla masịrị gị.
Naanị cheta iche echiche banyere ihe ndị ga-adọrọ mmasị na nyocha gị, yabụ ị nwere ike ịhazi ha na nyocha nyocha gị. Agaghị enwe ụzọ isi gafee-tab maka ego ị ga-enweta, ma ọ bụrụ na ị jughi ya maka nyocha izizi gị.
Anyị nwere olile anya na nyocha nyocha na nyocha nyocha bara uru maka gị! Ka nwere nyocha ajụjụ nyocha ọzọ? Kedu maka ihe atụ nke nghọta iji nweta site na iji obe-tab ma ọ bụ njirimara nyocha? Gwa anyị banyere ya na ngalaba nkọwa dị n'okpuru. Daalụ!
Tags: nyochaa nsonaazụ nyochaobe-taabụnzachanyocha onlineSurveyMonkey
Mee 21, 2012 na 5: 46 PM
Ya mere, senti nwamba ahụ ọ ga-eme ka cat ahụ ghara ịnwụcha ísì? Ma ọ bụ mee ka ndị mmadụ na-esi isi ka nwamba? 😉